EX - ABSDF: “ကားပါမစ်ငြိမ်းချမ်ရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့…. ABSDF ပန်းဘဲဖို တော်လှန်ရေး.ခွပ်ဒေါင်းများ….”
“ကားပါမစ်ငြိမ်းချမ်ရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့…. ABSDF ပန်းဘဲဖို တော်လှန်ရေး.ခွပ်ဒေါင်းများ….”
Maung Kyaw added4photos.
စက်လှေတစီးလာကပ်ပြီး….ပြန်ထွက်သွားသည်..ခဏကြာတော့...... .နွေရာသီသံလွင်ကမ်းပါး…သဲဂျောက်နက်ကြီးကို.ကုပ်ကပ်တက်လာတဲ့… မဲမဲ..သေးသေး..လူငယ်တယောက်..ကျနော့ဈေးဆိုင် တဲကလေး… ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျောပိုးအိပ်လွယ်ရက်ကြီးနဲ့ ….ပက်လက်လန်နေသည်။
“ မိုင်းလုံးကြီး (မဲစရီးရန်း) ကပါ…တပ်အတွက်ရိက္ခာငွေသွားထုပ်တာဗျာ… တပါတ်ရှိပြီ..ဒီနေ့ မှလှေကြုံရလို့ …နောက်မှာ ငတ်နေကြလောက်ပြီ… သုခိတာတလိပ်လောက်မစ..စမ်းပါ….”
ကျနော်အမှတ်တမဲ့နောက်လိုက်မိသည်.. “ဟာ..အထုပ်ကြီးလွယ်ထားပြီး…..ကရောင်ထစ် (ထိုင်းစီးကရက်) လေးဘာလေးတခါတလေ..ဖွာစမ်းပါ….”
“ဟာ…ခင်ဗျား..ကျနော့ကို…အထင်သေးလိုက်တာဗျာ…ဒါငတ်နေတဲ့ရဲဘော်တွေစါးဖို့ ….ငွေလေဗျာ…. ကျနော်ဆေးလိပ်ဝယ်သောက်ဖို့ မှမဟုတ်တာ…ကျနော်ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးကဲကျနော်သွားတော့မယ်….”
“ဟေ့…ကိုဆန်းလင်း…နေစမ်းပါအုံး…ကိုယ့်လူကလဲစိတ်ချည်းဘဲ….. စီးကရက်က…ဝယ်သောက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး…သစ်စက်ကကောက်ထားတဲ..ပကာတွေ…ကျုပ်မနေ့ ကလှေတစီးရောင်းလိုက်ရလို့ထောနေတယ်ဗျ… အဲ့ဒါ..စခမ်းကကိုယ့်အဖွဲ့ တွေ…အဖြူလေးဘာလေးတခါတလေဖွာစေခြင်လို့ ဟာ….. မလာကြလို့ ….အတော်ဘဲ…ခင်ဗျားယူသွားပေးလိုက်….”
ကျနော်သံပုံးထဲမှ….စီးကရက်၃ဘူးထုတ်၍…သူ့ လက်ထဲထည့်လိုက်သည်။ သူအားတုံ့ အားနာနှင့်ပြုံးသွားသည်။… “.ဟာ……အေးဗျာ….ဆောရီး…..ကျနော်က…..” “ကဲ…ကျနော်က…မနေနဲ့ …လစ်တော့….ခင်ဗျားလူတွေမျှော်ပြီ………” …... စီးကရက် ၃ ဘူးကိုင်.. ဆေးပေါ့လိပ်ဖွာရင်း.. ကျနော်လိမ်လိုက်သည်ကိုယုံပြီး..ကျနော်ပေးသည်ကိုလက်ခံ ၍ ABSDF ရင်း၂၁၀ ရှိရာဖက်သို့ ..ထွက်သွားသော..ဆန်းလင်း ၏ ကျောပြင်ကို…ကျနော်ကျေနပ်စွာငေးကြည့်နေမိသည်…….. ပြန်တောင်တောင်းပန်သွားလိုက်သေးသည်….. တကယ်က..ကျနော်..ဘာမှမရောင်းရ..ဘာမှမထောခဲ့…အခုလဲမထော.... …နောက်လဲထောမည်မထင်ပါ…. သို့ သော်…သူလက်ခံ..စိတ်ချမ်းသာမည်ဆိုလျှင်….. ဆက် ၍ ဆက် ၍ လိမ်ချင်ပါသေးသည်။
— with Win M Naing.
Posted by lu bo at 2:47 AM